Nhumwe dzeKimberly Process Dzotarisirwa muZimbabwe neMugovera
Nhumwe dzeKimberly Process dziri kutarisirwa munyika neMugovera kuti dzienderere mberi neongororo yekuti zvinhu zvakabvumiranwa kuti Zimbabwe iite munyaya yemangoda ekwaMarange, zviri kuitwa here nenzira kwayo.
VaAbbey Chikane mumwe weavo vari kutarisirwa kusvika munyika vakamirira Kimberly Process. Ukuwo makurukota anoona nezvezvicherwa muAfrica ari kusvikawo munyika nesvondo kuti vaone kuti Zimbabwe iri kufambisa sei nyaya yemangoda.
Gurukota rezvicherwa, Va Obert Mpofu, vanoti hurumende yaita zvese zvinodiwa ne Kimberly Process. Vati gadziriro iri kuitwa kuti vanotenga mangoda vauyewo munyika.
Va Dewa Mavhinga vanoshanda ne Crisis in Zimbabwe Coalition. Va Mavhinga vanoti nhumwe idzi dzinofanira kutarisawo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu vekwaMarange, nyaya yemasoja nemapurisa nezvimwe zvakadaro.